Ayisiyonto ilula kubathengisi | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 5, 2009 Lwesine, ngoFebruwari 9, 2017 Douglas Karr
Isitshixo kuninzi lwamakhonkco endiwabelana nawo kunye nezithuba endizibhalileyo kule bhlog yile esizisebenzelayo. Isizathu silula… ngaxa lithile, abathengisi banokubashukumisela ngokulula abathengi ngegama, uphawu lwentengiso, ijingle kunye nokupakisha okuhle (ndiyavuma ukuba iApple isalungile kule).
Amajelo abonisa ulwalathiso. Ngamanye amagama, abathengisi banokulixelela ibali kwaye abathengi okanye abathengi be-B2B kufuneka balamkele… nokuba lichane kangakanani. Abathengisi babeneziteshi ezi-3 zikamabonakude wesizwe, unomathotholo walapha ekhaya, iphephandaba, iibhodi zeebhodi, iinkomfa, (ezintsusa) zaMaphepha aMthubi, ukukhutshwa kwemithombo yeendaba kunye neposi ngqo. Ubomi babulula kakhulu.
Ngoku sinamakhulu amajelo kamabonakude wasekhaya nakwilizwe, unomathotholo wasekhaya kunye nesathelayithi, amaphephandaba, i-imeyile ethe ngqo, i-imeyile, iiwebhusayithi ezinesitayile sencwadana, iibhlog, uthungelwano olungenamkhawulo kwezentlalo, iinjini zokukhangela ezininzi, iisayithi ezininzi zokubhukisha ezentlalo, iibhloko ezincinci, Ukutya kwe-RSS, izikhombisi zewebhu, iibhilibhodi, ukukhutshwa koonondaba, amaphepha okusetyenziswa, ubungqina babathengi, iincwadi, iinkomfa, intengiso yemidlalo bhanyabhanya, ukuthengisa ngomnxeba, iinkomfa ezincinci, iqela lamaphepha aMthubi ahlukeneyo, imeyile ngqo, amaphepha-ndaba asimahla, ukuthengisa ngeselula, hlawula -cofa intengiso, intengiso ye-banner, intengiso yokuhambelana, iiwijethi, ukuthengisa umdlalo wevidiyo, ukuthengisa ividiyo, ukuthengisa ngentsholongwane, ukujolisa ekuziphatheni, ukujolisa kwendawo, ukuthengisa iziseko zedatha, iinkqubo zokudlulisela, ulawulo lwegama, umxholo owenziwe ngumsebenzisi, amanqaku, uphononongo… uluhlu iyaqhubeka qhubeka qhubeka… kwaye ikhula yonke imihla.
Ngelishwa, amasebe ezentengiso awakhulanga nge-chasm ebanzi ye-mediums, baye bancipha. Kananjalo, ikharityhulam yomfundi ophakathi weNtengiso yiminyaka emva apho sifuna ukuba babe khona. Andikwazi ukuzibuza ukuba ingaba amehlo athe phamlili kangakanani kwintengiso yabafundi kufuneka abe xa bengena emnyango!
Abathengisi Bafuna Uncedo
Kwangelo xesha, i-Intanethi-aka Ulwazi oluPhezulu -, Unonikezelo olungapheliyo lwezimvo kunye nezixhobo kuye nabani na onomdla wokuziphicotha. Ingxaki kukuba izimvo azinasiphelo- kwaye uninzi lwazo alusebenzi kakuhle.
Akululanga kubathengisi, ke bahlala befumana uncedo. Kodwa uncedo alusoloko lubakhokelela kwicala elifanelekileyo.
We isikolo esidala Abathengisi bafunde indlela yokuvavanya, ukulinganisa, ukuvavanya kunye nokulinganisa kwakhona ukubeka phambili amaphulo ethu kunye nokusebenzisa amandla kwinto nganye ngelixa siqinisekisa ukuba imbuyekezo kutyalo-mali ibigcinwa ngokungaguquguqukiyo. Sifunde indlela yokwenza izinto ngokuzenzekelayo ukuze kunyuswe inani leefayile ze- ichukumisa sinabathengi kunye nethemba ngelixa sinciphisa izibonelelo eziyimfuneko. Sifunde indlela yokwahlulahlula isandi kwingxolo, sifunde ngokusebenza, kwaye sifunde ngokukhawuleza nangoburhalarhume.
Kukho ukungqubana okwenzekayo ngoku phakathi kwabacebisi abancinci bokuthengisa kwi-Intanethi kunye neengcali ezindala ezineshishini, nangona kunjalo. Sifunde iHype njengesiqhelo emva kokungena kwindawo yentengiso kule minyaka ingama-20 idlulileyo. Zifumanele ingcali esele ikwenzile oku kwaye iyayazi indlela yemozulu.
Ishishini lakho lixhomekeke kwabo ubathembileyo! Qinisekisa ukuba abo ubathembayo banamava ayimfuneko ukuze baphumeze umbono kwaye bafike kwinto eza kuqhuba ishishini lakho.
tags: iqela lamaPhepha aMthubi ahlukeneyointengiso yokudibanaIsibhengezo sentengisoUkujolisa kwindlela yokuziphathamabhilidiblogsincwadana ezinemifanekisoiindawo ezininzi zokubhukisha ezentlaloubungqina babathengiukuthengisa iziko ledathaileta ngqoemailsimahla amaphephandabaUkujoliswa kwendawoirediyo yendawo kunye neyesatelliteIincwadi ZentengisoIiNkomfa zeNtengisoiibhloko ezincinciiinkomfa ezincinaneurhwebo mobileIntengiso yemidlalo bhanyabhanyaiinjini zokukhangela ezininziumabonwakude wesizwePhe phandabahlawula ngokucofa intengisozokushicilelwaukulinganisaiinkqubo zokudlulisaulawulo lwegamaReviewsrss ukondlai-telemarketingIinethiwekhi zentlalo ezingenamdasebenzisa amatyalaUmxholo oveliswe ngumsebenzisiIntengiso yomdlalo wevidiyoukuthengisa ividiyointengiso yentsholongwaneImikhombandlela yewebhuwhitepaperswidgets
Feb 6, 2009 ngo-11: 14 AM
Uthetha inyani. Ndithe ndisaguqile ndangena kwinqanaba lesidanga senkosi yam, ndafunda ngokukhawuleza ukuba isebe belisemva kulwazi lwabo ngezixhobo zosasazo esinazo ukudlulisa umyalezo wethu. Njengengcali yobudlelwane boluntu, ndikufumanisa kunzima ukugcina ulwazi lwethekhnoloji.
Kodwa ukuba inye into endiyifundileyo. Kuxabisekile kukufunda iindlela. Jonga ukuba basebenzisa ntoni abantu ukunxibelelana kunye nokungasebenzisi. Ewe kunjalo, kuya kusiba nzima ngakumbi xa siqala ukwahlula abaphulaphuli.
Ekugqibeleni, ndicinga ukuba abantu basebenzisa ntoni ukunxibelelana akubalulekanga kunomyalezo ohanjiswayo. Ukuba umyalezo ulula, uyothusa, uyathembeka, ukhonkrithi, uchukumisa iimvakalelo kwaye uxelela ibali, ke loo nto ivelisa imbuyekezo engcono kutyalo-mali, ekufuneka ilinganiswe ngedola kunye neesenti, kodwa nakwindlela ekwakhiwa ngayo kwaye igcinwe ngayo ubudlelwane.